Photo | Sawir/keyd/Ergo
Radio Ergo 02 October, 2017 MUQDISHO
Ku dhowaad dad lagu qiyaasay 15,000 oo qoys oo ku nool xeryaha lagu barakacay ee Muqdisho ayaa ka cabanaya inaaney sidii loo baahnaa u helin deeqaha gargaarka ee loogu tala galay. Dadka ayaa ku eedaynaya horjoogayaasha xeryaha iney masuul ka yihiin lunsashada gargaarka.
Maamo Ambiyo oo aan ahayn magaceeda saxda ah waa hooyo haysata saddex gabdho ah, waxay ku jirtaa xerada Daryeel oo ay ku biirtay bishii 8-aad ee sanadkii 2016-kii, waxaana xerada ku nool kun qoys oo barakacayaal ah. Waxay ku taalaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho waana xerada keliya ee dawladda Soomaaliya maamusho. Radio Ergo ayay u sheegtay in tan iyo markii ay timi xerada tiro saddex jeer la leexsaday gargaar raashin ah oo loogu tala galay dadka xerada ku jira. Saddex kamid ah horjoogayaasha xerada ayayna sheegtay in ay tallaabadaas ka danbeeyeen.
“Saddex gaari oo ay ku raran yihiin raashin sida Bur, Bariis iyo Sonkor ayaa lagu dajiyay teendho loogu talagalay in raashinka la dhigo, aad ayaan u faraxsanayn waqtigaas oo aad xaaladu noogu adkayd laakin maalin kadib oon moodnay in raashinka la qaybinayo waxaan ka warhelnay in dib loogu rarayo gawaari kale oo ay keensadeen horjoogayaasha sidaasna ay raashinkii ku qaateen”ayay tiri.
Maamo Ambiyo iyo qoyskeeda waxaa gargaar laga leexsaday ugu danbaysay bishii lasoo dhaafay ee Agoosto. Waxayna Ergo u sheegtay in sababta ay uga aamusanyihiin dhibaatada haysata tahay cabsi ay ka qabaan ragga horjoogayaasha ah.
Canab Nuur Maxamed oo haysata saddex gabdhood iyo wiil ayaa xerada Daryeel ee Muqdisho ku biirtay bishii 10-aad ee 2016-kii, kadib markii 25 neef oo lo’ ah ay abaartu ka dhisay, wakhtigaas oo ay ku sugnayd degmada Waajid ee gobolka Bakool. Tan iyo markii ay xerada timi waxay sheegtay in sadex jeer gargaar la keenay, isla markaana aanay nasiib u yeelan inay wax ka hesho.
Deeqda koowaad ayay sheegtay in la keenay bishii 10-aad shan iyo tobankeedii, taasi oo ay tilmaamtay in ay qaateen horjoogayaasha xerada oo u sheegay barakacayaasha in loo maamuli doono raashinkana loo karin doono. Wixii markaas ka danbeeyeyna aanay dib u arag. Deeqdii xigtay ayay sheegtay in la keenay bishii November afarteedii, taasi oo ay koox hubaysan xilli habeenimo ah ka rarteen teendho horay loo dhigay. Gargaarkii sadexaad ayay sheegtay in sanadkan la geeyey xerada kaasi oo isugu jiray 3 loor oo Bur, Bariis iyo Sonkor. Hooyo Ambiyo ayaa sheegtay in deeqdaas bar kamid ah ka qaateen saddex nin oo horjoogayaasha xerada ka tirsan.
“Markii intaan oo dhib ah ay dhaceen waxaan isku dayay inaan la hadlo horjoogayaasha laakiinse way i handadeen, wixii markaas ka dambeeyey waxaan qorshaystay inaan xerada ka guuro laakiin waan waaway meel kale oo aan dego”… Ayay tiri, waxayna intaas ku dartay in dhibaatadan sida looga bixi karo ay tahay iyadoo dowladdu isbadal ku samayso hoggaanka xeradan.
Maxamuud Shiikh oo kamid ah masuuliyiinta xerada Daryeel ayaa iska fogeeyey eedahaas, wuxuuna ku tilmaamay beer abuur “Annaga dadka waxii loogu talagalay ee loo keeno si sax ah ayaan ugu qaybinaa mana ku samayno wax xadgudub ah , tan iyo intii ay yimaadeen raashinkii gargaar ee la keenay sidooda ayaan gacanta uga saarnay”ayuu yiri.
Ma ahan xeradan oo keliya meelaha ay barakacayaashu dhibaatada ka sheeganayaan. Xerada Iskaashi waxay kamid tahay meelaha loo barakacay ee ku yaalla duleedka Muqidho, waxaa hoos taga ilaa 4 xero oo kale oo midkiiba ay ku noolyihiin kun qoys. Muxsino Axmed Macallin oo dadkaas kamid ah waa hooyo haysata laba gabdhood iyo wiil oo aabohood geeriyooday. Xeradan ayay ku biirtay muddo laga joogo shan bilood.
Waxay sheegtay in deeqaha ay helaan qayb kamid ah ay la haraan horjoogayaashu “Annaga boqolkiiba boqol wax nasoo gaara ma leh. cuntada qeyb ayey soo reebtaan kadibna inta kale ayey noo keenaan”. Ayay tiri.
Guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa sheegay in walaac badan ka qabaan horjoogayaasha xeryaha ee leexsanaya gargaarka. waxaana guddigu uu tilmaamay inay xog baaris ku samaynayaan arrimahan sharci darrada ah ee ay ku kacayaan horjoogayashu.